THBP: သင်္ကြန် ခေါက်ဆွဲသုပ်
အထူးအဆန်းမဟုတ်ကေလေ့ ကိုယ့်စော်ကိုယ် တော်ရုံတန်ရုံလုပ်စား ဖြစ်စော်တိမဟုတ်ခါ ခေါက်ဆွဲလောင်ဗွန်းကို မြင်လိုက်စော်နန်. ရွှေရစော်ထက်ပျော်ရေ။
ကိုယ်ရို.ပမှာ သင်္ကြန်ခါဆိုကေ ကြာဇံကို ယင်းပိုင်ဗျယ်အားရပါးရ သုပ်တေမဟုတ်ပါလားယေ။ အိမ်မှာ သင်္ကြန်ခါ အိမ်သား တယောက်ယောက် အစာတက်ပျယ်ဆိုကေ မုန်.ချိုချေလုပ်ပြီးကေ ဘုရားကပ်၊ ပြီးကေ အေ ခေါက်ဆွဲ မဟုတ်ကေ ကြာဇံကို အမြဲတမ်းသုပ်ပြီးကေ အိမ်တိုင်းလိုက်လို.ဝီပါရေ။
ချက်နည်းကတော့ ထူးထူးခြားခြားမဟုတ်ပါ။ ဆီချက်တေအခါ အရောင်တင်နဲ. ငပိနဲ.ထည့်ချက်။ ပြီးကေ ကြက်သွန်ကြော်၊ ကြက်သွန်စိမ်းနဲ. ကြက်ဥပြုတ်ပပါးချေလှီးပြီး အုပ်ထားစော်။ ပြောခါလွယ်ရေ။ ကိုယ့်စော်ကို လုပ်ကြည့်လို. အချိန်အဆ မတတ်ကေ ပျက်ပျယ်ယေ။
မေမေ ပြန်လခကေလေ့ သတိရပါရေ။ အမိအေခေါက်လာခါ စိတ်ချမ်းသာအောင်ထားလိုက်ရပိုင်မတွိ။ တခုကိုလေ့ အလှပ မလိုက်ပို.လိုက်ရ။ တချိန်လုံးအလုပ်ထဲမှာ။ ပြန်လာကေ အိပ်ပျယ်။ ရုန်းနီရ ကန်နီရစော်ကိုး ဘဝမှာ။ နောက်နှစ်ပ လေ။ နောက်နှစ်ခါတော့ သေသေချာချာ မေမေလာရေတစ်လ သမီးလိမ္မာ ဖြစ်အောင် လုပ်ပါဖို.။